केहो अटिजम? लक्षण र रोकथाम - hamrohealth
केहो अटिजम? लक्षण र रोकथाम
चाइल्ड केयरमा केटाकेटीलाई पढाउने गोमा आफ्नै छोरालाई भने ध्यान दिएर नपढेको भनेर कुट्दै थिइन्। छोराले अरु बच्चाहरुले जस्तो नपढी एकोहोरो भएर बसिरहने गरेको गोमाको भनाइ थियो। तर, उनका श्रीमान् भने आफ्नो छोराको बचाउ गरिरहेका थिए।
गोमालाई सिकाइमा व्यक्तिगत भिन्नता रहन्छ, सबैको क्षमता एकैनासको हुँदैन, मानसिक अथवा बौद्धिक क्षमताको विकास निश्चित उमेर समूहको बुद्धिअनुसार नै हुँदै जाने हुन् भन्ने ज्ञान थिएन। श्रीमान् भने गोमासँग आफ्नो नानीमा फरक समस्या रहेको जिकिर गरिरहन्थे। छोरा अटेरी, जिद्दी, कप्टी भएको भन्दै गोमा अफ्नो चार वर्षीय छोरालाई कराइरहन्थिन्।
श्रीमानको गगुवाइमा जब बच्चालाई बाल रोग विशेषज्ञकोमा लगियो, अनि थाहा लाग्यो, नानी कप्टी हैन, विशेष प्रकारको उपचारको पर्खाइमा पो रहेछ। त्यसपछि उसलाई व्यावहारिक थेरापीका लागि काउन्सेलिङमा लगियो। त्यो बच्चालाई सामाजिक थेरापि अनि स्पिच थेरापिका निमित्त सम्बन्धित एक्सपर्टको सम्पर्कमा लगियो।
डाक्टरले त्यो नानीलाई ‘अटिजम’ भएको जानकारी गराए। त्यसपछि डाक्टरको सल्लाहबमोजिम उनको उपचार भइरहेको छ।
आज अटिजम सचेतना दिवस अथवा अटिजमका बारेमा सचेतना जगाउने दिन। आज सबै शिक्षित, अनुभवी र योसम्बन्धी जानकारले कम्तीमा आफ्ना सम्पर्कका परिवारलाई बुझाउने दिन। देसका विभिन्न ठाउँमा अटिजमसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्दै यो दिवस मनाइएको छ।
भनिन्छ, विश्वको जनसंख्याको १ प्रतिशत, त्यसमा नेपालमा मात्र करिब तीन लाख बालबालिका अटिजमको शिकार बनिरहेका छन्।
अटिजम के हो?
अटिजम एक प्रकारको न्युरो डेभलोपमेन्ट डिसअर्डर हो। यसमा बालबालिकाहरु सामान्य बालबालिकासरह गतिबिधि देखाउन असक्षम हुन्छन् भने केही अस्वभाविक गतिविधि देखाउने गर्छन्। यसमा बच्चाको उमेरअनुसार हुनुपर्ने व्यावहारिक विकास, सामाजिक विकास अनि एकअर्कामा सञ्चार गर्ने क्षमताको विकास भएको पाइँदैन।
छरछिमेकीले सल्लाह दिँदासमेत त्यस्तै हो मेरो पनि ढिलो बोलेको, ढिलो हिंडेको, अलिक पछाडि मात्र पढ्न थालेको जस्ता जवाफ दिने गर्छन्, जसले अटिजम भएको ढिलो पत्ता लाग्ने र समाधानमा कठिनाइ आउने गर्छ।
बालबालिकाको शारीरिक गतिविधिको प्रारम्भिक चरण भनेको दुई वर्षदेखि तीन वर्षलाई मानिन्छ। यसै उमेरमा उसले हातखुट्टाको प्रयोग गर्ने, साथिभाइहसँग इसाराले बोल्ने, शब्द र वाक्य प्रयोग गरेर बोल्ने अथवा सञ्चार गर्ने, साथीभाइ बनाउने मिलेर खेल्ने ईर्ष्या गर्ने गर्छन्। तर यदि नानीहरुमा सो प्रकृतिका क्रियाकलापहरु हामीले पाउन सकेनौं भने अन्य शारीरिक दुर्बलता हो या अटिजमको सिकार बनिरहेछ भनेर गहिरो चासो दिनु पर्छ।
बालबालिका दुईदेखि तीन वर्षको हुँदा अटिजमका लक्षण तथा चिह्न निगरानी गरिनुपर्छ। सामान्यतय: अटिजममा निम्नानुसारका लक्षण चिह्न तथा संकेत देखापर्छन्:
केहो अटिजम ? लक्षण र रोकथाम
– अरुलाई हानि पुर्या उने गतिविधि गर्ने
अटिजम को प्रतसत कसरी कम गर्ने.?
ती वर्षको हुँदा
Next स्वस्थ रहन महिलालाई १० सुझाव
2 weeks ago Hamrohealth